janvier 2015 – filazantsaramada
IRETO IZAY MANDRE NY TENIN’ANDRIAMITRA KA MANKATO AZY!
« Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin’ Andriamanitra ka mankato azy. » Lioka 8:21 Ary ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny nanatona Azy, fa tsy nahazo nihaona taminy, satria nifanety ny vahoaka. Na dia naniry mafy ny ho eo amin’i Jesosy aza ny reniny sy […]
Publié parfilazantsaramada janvier 30, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IRETO IZAY MANDRE NY TENIN’ANDRIAMITRA KA MANKATO AZY!
Fifaninanana Krismasy 2014
Ny Fitiavan’Andriamanitra Ho fankalazana ny krismasy 2014 dia nanatanteraka “Fifaninanana Krismasy 2014” ny Feon’ny Filazantsara nandritry ny volana Desambra 2014. Tao anatin’ilay fandaharana “Henoy ny feony” izay vokariny sy alefany isan-kerinandro amin’ny fampielezam-peo enina, manerana ny Nosy (Antananarivo: Radio RTF 91.2 FM, Radio ACEEM 103.4 FM; Antsirabe: Radio RFM 92 FM; Toamasina: Radio RNA 94.2 […]
Publié parfilazantsaramada janvier 29, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fifaninanana Krismasy 2014
Departemanta « Médecine Vétérinaire »
Natomboka am-bavaka ny taom-pianarana 2014/2015 Zava-dehibe ho an’ny Fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny Departemanta ny « Médecine Vétérinaire » eny Ambatobe ny fametrahana ny taom-pianarana eo am-pelantanan’Andriamanitra. Koa ny Alakamisy, 15 Janoary 2015 lasa teo, ho fanokafana ny taom-pianarana 2014/2015 dia nisy fiaraha-mivavaka nokarakarain’izy ireo. Ny lohahevitra nofinidiny tamin’izany moa dia mahakasika ny: « Fiaraha-monina amin’Andriamanitra »; Andriamanitra ilay Teny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Departemanta « Médecine Vétérinaire »
« Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana; Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy; Ary ny anarany no hitokian’ny jentilisa ». Matio 12:19-21 Io teny io dia hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny bokin’ny Isaia mpaminany Toko 42:1-3 entina […]
Publié parfilazantsaramada janvier 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY HIFANDITRA NA HIANTSO MAFY IZY…….
« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny Anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra. » Jaona 1:12-13 Teny iray azo avahana tsara eto ny teny hoe « nandray »ary azo raisina sary antsaina koa ny tanana mitsotra, manambara ny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 16, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY NATERAKY NY NOFO IHANY FA NATERAK’ANDRIAMANITRA!
Manitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Sekoly Ho an’ny taom-piasan’ny Feon’ny Filazantsara 2014/2015 (Jona 2014–May 2015) dia anisan’ny fikendrena ny fampivelarana ny asa amin’ny Sekoly Loterana sy ny Sekoly tsy miankina. Izany moa dia ny hitondran’ny FF hatrany ny anjara birikiny amin’ny fanabeazana ireo tanora. Ny faniriana dia hitomboan’izy ireo amin’ny fahendrena koa fa tsy amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 14, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa mikasika ny Tanora
« Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. » (Marka 10:15) Tsy afa-misaraka amina lakile ny fiainan’ny olona. Ampiasaina ny lakile noho ny antony ara-pitandremana manokana. Mety koa anefa ho tsy fifampitokisana. Jereo anie! Tsy maintsy idina amin’ny fanalahidy ny trano, fiara, […]
Publié parfilazantsaramada janvier 9, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANALAHIDINTSIKA
Ny Club, Lycée Nanisana sy ny fankalazana ny Krismasy 2014
Ny tanora sy ny fakam-panahy Toy ny fanao isan-taona dia miara-mankalaza ny krismasy ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana (UNESCO, GBU, Feon’ny Filazantsara, Kabary, Dessin…). Samy naneho ny talentany ho fanamarihana izany ny Club tsirairay avy. Tao ireo nanome ny feony tamin’ny alalan’ny hira, tao ny nanao kabary, tao ny nanao sary, ho […]
Publié parfilazantsaramada janvier 8, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny Club, Lycée Nanisana sy ny fankalazana ny Krismasy 2014